नुहाएपछि हात खुट्टाको छाला किन चाउरी पर्छ ?यसले के असर गर्ला ? यस्तो छ कारण पढेर सेयर गरौं – पुरा पढ्नुहोस्……
पानीमा छाला चाउरी पर्नु पनि त्यहि हो, कि हामी चीजहरुलाई ठिक ढंगले समाउन सकौं। सन् २०११ मा मार्केले एक अनुसन्धानको क्रममा यस्तो विशेषता बाँदरमा पनि भेटेका थिए। यसको एउटै अर्थ हुन्छ कि पानीमा हाम्रो पकड बलियो होस्। ब्रिटेनमा सन् २०१३ मा भएको एक प्रयोग यो पनि देखायो कि भिजेको हातले पानी भित्र चीजहरुलाई यता-उता छिटो छिटो गर्न सकिन्छ।
सुख्खा हातले यहि काम गर्न बढी समय लाग्छ। तर एक वर्ष पछि जर्मनीमा यहि प्रयोग फेरी भयो जुनमा नतिजा उल्टो आयो। नजिता आयो कि भिजेको हात र सुख्खा हातले काम गर्दा कुनै फरक हुँदैन। भिजेको खुट्टाले भुइँमा टेक्दा चिप्लिने बढी डर हुन्छ, कतै समात्न खोज्दा चिप्लो भएर समात्न सकिन्न। तर कम्तिमा ५ मिनेट पानीमा भिजेको हात वा खुट्टामा पर्ने चाउरीको कारण भने त्यस्तो चिप्लोपना कम हुन्छ। मार्क भिजेको चाउरी आफ्नै शरिर धान्न उपयोगी हुने ठान्छन्।
Prevभारतीय सीमामा नयाँ पिलर गाड्दा नेपाली भूमि मिचियाे, स्थानीय भन्छन् : तिरो तिरिरहेको जग्गा एक्कासी कसरी भारतको हुन्छ ? त्यहाँको पछिल्लो अवस्था यस्तो छ (पुरा विवरण हेर्नुहोस्)
Nextउपराष्ट्रपति पुनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पठाए यस्तो सन्देश…..
आफ्नो काखमा हुर्किएको अनमोल केसीलाई भेटेपछि मख्ख निरुता (भिडियो सहित)
अर्जेन्टिनाले खायो नसोचेको गोल, मेस्सी निरिह, क्रोयसियाको गजबको खेल….
सामा’जिक संजा’लमा भाई’रल भएको दुइ युवतीको दमदार डान्स -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)